Wonke umuntu wesifazane, intombazane, intombazane in ikhabethe lakhe has a ingubo. Lokhu ngubo kwenza kube lula ukwakha isithombe nsuku, noma reception. Into esemqoka - ukuba nomuzwa isitayela kanye ukunambitheka.
Namuhla ozinikezele esivuna - ingubo-shirt, ephethe isikhundla kuhle oqinile TOP yinjwayelo izinto iminyaka eminingi. Futhi lokhu kungokwemvelo, ngoba intandokazi ukhululekile eside, amahhanisi amabili, akukho gum, imicibisholo, umbani kanye ahlabayo khulula. Lapho inguqulo ye ekhaya izingubo - Namuhla lo mkhuba imfashini. Nazi izimiso ngisho izimfihlo kanjani nokuthi yini ukugqoka izingubo ezinjalo.
Dress-shirt - le ngubo kokubili ehlobo futhi inkathi yasekwindla-ubusika. Ukuyikhulula ngokuvamile ezenziwe obukhulu Indwangu wathungela, okuyinto ukuba elula ezinhle zishunyayelwe. Ngakho-ke, kulula futhi ukhululekile ukuhamba ngisho kushisa (ngenxa ukungabikho imikhono collar).
Kukhona ingubo izikibha kuthiwa obuphelele eside, short naphakathi. Line ngalé futhi ahlukahlukene ngempela. Ungathola izingubo okuxekethile, ne kancane lwavutha noma ezifincizekile ezifana nezimpiko iziketi, noma ifomu esinamathelayo ekahle.
Umbala ezihlukahlukene igqoka okukhulu. Ngo boutiques kungabonwa njengesibonelo omunye umbala, kanye yezicathulo nge egqamile futhi ngisho kuhlanganiswe. Le sizini, isibonelo, imfashini ingubo-shirt, efana vest. imivimbo Bright ovundlile sokujabulisa abathandi isitayela ulwandle. yezicathulo Sly njengoba namathafa, zasolwandle noma nemifino amaphethini ukunikeza wadala image okwakhe futhi ubuntu.
Isibalo kangcono ingubo efanayo - yebo 90-60-90, nge kamnandi emahlombe ezitshekile nezandla enhle. Dress ihembe uvule la izingxenye zomzimba. Ngakho-ke amantombazane ngokugcwele kule modeli asifanele (sibalo amaphutha efiselekayo ukufihla noma ukuhlobisa).
Ukuze-hudyshek amantombazane abangenalutho ukufihla, ingubo-shirt - inketho ephelele ukudala isithombe. Ukuhluka ayizinkulungwane. It kungenziwa kuhlangene ewumngcingo ibhulukwe, leggings, jeans, izikibha amafushane, noma nje ukushiya ingubo. Shoes kungabuye nhlobonhlobo. Ideal ukuba ballerinas. Nakuba version ibhizinisi izikebhe enhle ngesikhathi hairpin, njengoba kwezemidlalo - izicathulo, inketho kwansuku - Espadrilles. Ngokuvamile, ingubo-shirt behlezi kahle izicathulo ngesikhathi yedwa ongaphakeme, okuyinto cishe ezingabonakali.
Le sizini, abaklami ukunikela izingubo ezifana amvikele encane nge mncane wayibhinca ehlombe. Bafanele esithambile futhi njengabesifazane.
amasethi Good for izikhathi ezahlukene
Uma ukhetha izesekeli sokunene imibala, ungathola isethi ezithakazelisayo nsuku, lobusuku gala nokuhamba ngesikebhe noma kusihlwa cool.
Nazi ezinye izinketho yilezi:
Sea indaba ephathwayo ethandwa kule sizini. Wejazi ingubo e imivimbo okwesibhakabhaka nomhlophe - futhi ephelele ehlobo bheka ngomumo. Supplement ke, uma uthanda, kungaba isigqoko esinompheme omkhulu ngemibala egqamile kanye shades of blue isikhwama beach. Futhi isigqoko kanye isikhwama engase aklonyeliswe nge amapharele yokufakelwa, zasolwandle, zensimbi. Nicela iqakala isongo mncane endaweni nautical indaba ephathwayo khulula (izinkanyezi, amapharele metal izindandatho, njll), Futhi izinyawo - ngomusa flip-flops ngokusebenzisa umunwe.
romance Timeless. Futhi engasindi ezindizayo ijezi ingubo izikibha ephelele lobusuku romantic. Kungenzeka ezinombala ofanayo noma kuhlanganiswe imodeli imbali nomhlobiso uphizi nge letingemasayizi lahlukene. Nge uyobheka izimbadada ezinhle noma High Heels, wayibhinca ezacile nokuthinta umhlobiso egqamile zokuhlobisa. Hhayi isithiyo kule isitayela nezimbadada (noma izimbadada) kunothile buckles noma shleek a amagejambazo encane noma izicathulo ephansi soled. Ikakhulukazi, uma ubude phansi. Kuye ubude ingubo ingacosha izimbadada nemfashini in isitayela yesiGreki ifenisha ku igolide imibala kanye Umdwebo isilwane ukuphrinta.
Izintandokazi nentsha ezemidlalo isitayela. Dress-ihembe ukulingana ngempela kuwo, njengoba kunoma iyiphi enye. Ngemva isikibha - kungcono cishe imfanelo eyinhloko iyiphi tracksuit. Kuzoba esanele ukukhetha izicathulo ekhethelo e ithoni efanayo, futhi elikhanyayo (ukhululekile kakhulu) sithombe zidalwe. Futhi kungcono uma izicathulo ne guipure ifaka ngesikhathi platform ongaphakeme. Njengoba izikhwama silingane isithombe ubhaka elikhanyayo sowesifazane (nge iphethini lobuhlanga noma mikhondo abanjengezilwane) noma ngobuningi isikhwama-isiqu. Belingana amateki isudu amateki noma izimbadada ukhululekile ngesitayela sporty. Uma kusihlwa cool phambi, musa konakalisa isitayela ihembe jini. Kuyinto enhle futhi okhalweni, ifindo alengayo ahlanganiswe sleeves usongwa.
Ihhovisi isitayela. Kuye ingubo kufanelekile shirts, ende eyenziwe ngendwangu obukhulu. Umuntu kumelwe amane eyolanda beige ibhantshi noma elimhlophe, izicathulo zakudala iphampa anokufana isikhwama. Yilokho, owesifazane ibhizinisi lilungele umhlangano ibhizinisi.
ehlobo kushisa futhi kunomswakama nolwandle ingubo-shirt kwisitezi cishe nolimi. Lokhu obuphelele uthande izicathulo flat. Lokhu ezihlukahlukene izimbadada, ballet emafulethini, flip flops noma oluthambile. Wayegqoka nezimbadada ukuze kwi isithende enamandla noma ematheni uhlobo ugandaganda futhi imfashini kakhulu kuleli hlobo. Mnene yothando igqoka, amahembe nezicathulo indawo esindayo - isizini Chic. Izikhwama okungcono enkulu: ebhishi, noma iziqu, noma "pochtalonka" nesitayela. Ubucwebe kufanele futhi ibe nkulu: isikhumba elengayo ezinkulu, indandatho elikhanyayo, bamabhengele lokhuni noma eyodwa ebanzi.
Iqoqo fashion igqoka, izikibha kule sizini ehlobo inikeza onobuhle eziningana.
Classical imodeli enwetshiwe. Uphelele futhi jikelele. Ungahlangana eziningi ongakhetha umbala, ikakhulukazi kusukela ijezi esithambile. Ubude kusukela ngamadolo phansi, ngokuvamile ohlangothini izimbotshana.
Combi imodeli: phezulu - isikipha, futhi phansi - isiketi ejwayelekile. Ukuhluka kusukela ezemidlalo (isiketi mini ku kuliske) nasemzini (isethi satin frills).
Gqoka nge armholes ezinkulu. Imodeli yakhelwe yesikebhe namabhishi. It lufakwa isudi ukugeza noma usaziwayo kwezemidlalo ka knitwear esihle. Lolu khetho kusihlwa ukuhamba.
Wejazi ingubo nge phansi Ragged. Imodeli imfashini kakhulu. Ngezinye izikhathi ukwenza ngaphambili esifushane kuka ngemuva. Noma dlala iDemo ohlangothini forehand futhi backside umphetho.
Senza dress wena
Futhi ungazama ukudala wobuciko yakho. Black Dress-shirt - imodeli ukuthi kungenziwa wamisa ngokuzimela amahembe la madoda amabili sika. Lo msebenzi ilula, umphumela ekhexisayo. On the ezivuzayo ohlangothini uyonquma imikhono (owodwa - kwesokunxele, kwesibili - kwesokudla). Okulandelayo udinga ukuhlela ezivuzayo ohlangothini. Nasi amateur: ungakwazi ngqo ukwenza ingubo kungenziwa kancane lwavutha. ezivuzayo Sew kufanele, ngayo. Ngemva kokuma isiqalo ubuciko.
Amaphijama for girls. Indlela ukukhetha izingubo ukulala?
Ikhethini leglasi lokugezela - isitayela futhi ikhululekile
Homemade shortbread bhisikidi: ibhotela iresiphi. baking esihlwabusayo
Ukuhlonishwa kwamalungelo komhiaba ukwakha ukwakhiwa okungagunyaziwe. semthethweni ukwakhiwa okungagunyaziwe